मानव शरीरमा हुने हरेक प्रक्रिया स्वास्थ्यको अवस्थाको लागि जिम्मेवार तंत्रिका तवरले विनियमित गरिन्छ। धेरै वर्षसम्म, औषधि विश्वस्त छ कि अधिकांश रोगहरू तंत्रिका तंत्रको विकारको कारणले घटाउँछ। प्रत्येक व्यक्तिले उत्तेजनालाई फरक पार्छ। विशेष गरी चिन्ता र आक्रामकता महिलाहरुमा मनाईन्छ।
महिलाहरु मा वृद्धि को जलन को मुख्य लक्षण:
तापमान परिवर्तन गर्न संवेदनशीलता;
तनावपूर्ण परिस्थितिहरु को लागी संवेदनशीलता।
यदि ठोस चीजहरू वरिपरि समस्याहरू छन् भने समस्याहरू छन्, तर कुनै पनि मदत गर्नको लागि त्यहाँ कुनै अन्य विकल्प छैन भने कमजोर कामका क्यान्सरहरूमा पारिवारिक कामहरू, काम र पारिवारिक सम्बन्ध राख्ने काम गर्नु हुँदैन। यदि तपाईं महिला दिवसको विस्तृत तालिकामा जानुहुन्छ भने, तपाइँ सबै मुद्दाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जुन प्रत्येक मिनेट चित्रित हुन्छ।
आदर्श विकल्प परिवारका सबै सदस्यहरूमा कर्तव्यको अधीन हुनेछ। सायद यो धेरै सजिलो हुनेछैन, तर सबै सम्भव छ। कारणहरू, जो अस्थिर अवस्थाको कारणले गर्दा समाजको व्यवहारमा सामान्यतया स्वीकार्य मानदण्डहरू हुन्छन्। अधिकांश महिलाहरु लाई थाहा छ कि काममा सबै केहि राम्रो छ भनेर निश्चय गर्न आवश्यक छ, एकै समयमा अधिकारीहरूलाई पालन र रोशनीलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। तर पछि, यो सबै संग सम्बन्ध छ कि किन महिलाहरु आक्रामकता को आक्रमण र प्रियजनहरुमा क्रोध को एक विस्फोट संग अवसाद प्रभाव छ।
महिलाहरु मा वृद्धि को जलन को कारणहरु
चिकित्सकहरु र मनोवैज्ञानिकहरु को अनुसार, महिलाहरु मा जलन बढाने हार्मोनल पृष्ठभूमि मा मासिक परिवर्तन को कारण प्रकट हुन्छ। उस्तै प्रभावमा महिला महिला रोगहरू हुन सक्छन्, यसैले, यदि तपाइँ एक समस्याको सामना गर्दछन् भने तपाईलाई तुरुन्तै सल्लाहको लागि डाक्टरमा जानुपर्छ।
यदि हामी premenstrual सिंड्रोम बारेमा कुरा गर्छौं, त्यसपछि एक महिलाले उत्कृष्ट स्वास्थ्य संग र गर्भनिरोधी समस्याहरू गर्नुभएन भने हार्मोनलमा परिवर्तनहरू दृढतापूर्वक प्रतिक्रिया गर्दैनन्। यस अवधिमा पृष्ठभूमि, जो उल्लङ्घन गर्ने महिलाहरूको बारेमा भन्न सकिँदैन।
गर्भावस्थाको समयमा चिन्ता
गर्भवती हुन, महिला तपस्या भत्किएको छ, सम्बन्ध पत्ता लगाउने तीव्र आवश्यकता छ, जसको पछि उनी कोठामा आँसु र अपराधको भावना संग एक कोठामा बन्द भएको छ। धेरै आक्रामक कारक हो कि यस्तो विवाद दैनिक हुन्छ, भले पनि भविष्य मा आमाले आफुलाई प्रारम्भिक हो भनेर बुझाउँछ।
यो कारण गर्भावस्थाको समयमा एक महिलामा भएको परिवर्तन हो। यो केवल हार्मोनल होइन तर शारीरिक परिवर्तन पनि होइन।
जंगको व्यक्तित्व सिद्धान्त
Savant सिंड्रोम र अद्वितीय क्षमता संग मान्छे
न्यूरोसहरूको लागि मनोचिकित्सा
आफैलाई प्रेम गर्नुहोस् - मनोवैज्ञानिक प्रविधि
मनोविज्ञान को कार्य
चूहों को डर
टेलर स्विफ्ट जो एल्विनसँग उनको कुराकानी भयो
सिबेलो नेशनल पार्क
मृत्युको बारेमा9भयानक तथ्यहरू पेरिसको क्याराकोमेब्समा
एन्जिना बच्चाहरु - लक्षणहरू
पनीर संग अच - नुस्खा
कमजोर श्रम क्रियाकलाप - गम्भीर जटिलताहरू कसरी जोगाउन सकिन्छ?
सानो कोठाको लागि विचारहरू - एक सजिलो व्यवस्थाको लागि उत्तम समाधान
पेट गुफा को एमआरआई
ल्याप्टपमा स्पर्श माउस कसरी असक्षम पार्नु हुन्छ?
आलु संग ब्रेस्ड खरगोश
बच्चाहरु मा ग्लुटन को एलर्जी - लक्षण
बैठकको बैठक गर्दै
जेसी जेम्सले कठिन जीवनको गुनासो गरे र सनरा बललाई माफी माग्यो